Infographic: Inona no ataon'ny olona amin'ny Internet?
Fikarohana Pew momba ny hetsika an-tserasera
Zoma 18 Novambra 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Inona no ataon'ny olona amin'ny Internet? Ity infographic ity dia milaza ny valiny… manangona tahirin-kevitra 3 taona ao amin'ny Fanadihadiana momba ny Tetikasa Pew Internet & American Life Project nanomboka ny taona 2009, 2010 ary 2011. Ny fikarohana feno dia mandeha amin'ny alàlan'ny fialamboly, tambajotra sosialy, vola, vaovao, orinasa, fiantsenana, fikarohana ary fiantsenana!
Efa ho ny 80 isanjaton'ny olon-dehibe Amerikanina no mampiasa Internet. Efa mba nanontany tena ve ianao hoe inona no ataon'izy ireo amin'ny Internet? Moa ve izy ireo mandefa mailaka, miantsena an-tserasera, na mandefa horonantsary Youtube? Jereo eto ambany.
Inona no ataon'ny olona manao ny betsaka indrindra amin'ny Internet? Mandefa na mamaky mailaka. Inona no ataon'ny olona manao ny kely indrindra? Blog! Ny fangatahana tsy fahampiana dia mitaky ny fitakiana… Tiako ny fisian'ny olona maro tsy manao bilaogy… midika izany fa lehibe ny fahafahanao mihaino.
Infographic avy amin'ny Flowtown - Fampiharana momba ny haino aman-jery sosialy.
Tags: dabilioFanadihadiana momba ny Tetikasa Pew Internet & American Life Projectfikarohana amin'ny Internetizay ataon'ny olona kely indrindra amin'ny Internetinona no ataon'ny olona betsaka indrindra amin'ny Internet
Aza asiana mailaka amin'ny mpandoro aoriana!
Fahefana momba ny trano ho an'ny fikarohana